Yobhi 36 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
36 Waza wahlabela mgama uElihu wathi: 2 “Khawube nomonde kum okwethutyana, yaye ndiya kuvakalisa kuweUkuba kusekho amazwi endinokuwathetha ngoThixo. 3 Ndiya kulususa kude ulwazi lwam,Yaye ndiya kububalela kuMenzi wam ubulungisa.+ 4 Kuba enyanisweni amazwi am akabobuxoki;Yaye Lowo ugqibeleleyo ngolwazi+ unawe. 5 Khangela! UThixo unamandla+ yaye akayi kugatya;Unamandla entliziyo; 6 Akayi kumgcina ephila nabani na ongendawo,+Kodwa uya kuwunikela umgwebo wabo baxhwalekileyo.+ 7 Akayi kuwasusa amehlo akhe nakubani na olilungisa;+Kwanookumkani abasetroneni+—Kwakhona uya kubahlalisa ngonaphakade, yaye baya kuphakanyiswa. 8 Yaye ukuba babotshwe ngamakhamandela,+Bathinjwa ngeentsontelo zenkxwaleko. 9 Uya kwandula ke abaxelele ngendlela abenza ngayoNokunxaxha kwabo, ngenxa yokuba bazenza abongamileyo. 10 Yaye indlebe yabo uya kuyityhila kwizibongozo,+Aze athi bafanele babuye koko kwenzakalisayo.+ 11 Ukuba bayathobela bakhonze,Imihla yabo baya kuyigqibela kokulungileyoNeminyaka yabo ebumnandini.+ 12 Kodwa ukuba abathobeli, baya kudlula+ nangomjukujelwa,+Yaye baya kubhubha bengenalwazi. 13 Abo baneentliziyo eziwexukileyo baya kubeka umsindo.+Abafanele bakhalele uncedo ngenxa yokuba ubabophile. 14 Umphefumlo wabo uya kufa ebutsheni,+Nobomi babo phakathi kwamahenyu asetempileni.+ 15 Uya kumhlangula oxhwalekileyo kwinkxwaleko yakhe,Yaye uya kuyityhila indlebe yabo kwingcinezelo. 16 Ngokuqinisekileyo uya kukukhulula emlonyeni wokubandezeleka!+Endaweni yako kuya kuba yindawo ebanzi,+ kungekhona ecuthekileyo,Yaye intuthuzelo yetafile yakho iya kuzala kukutyeba.+ 17 Ngokuqinisekileyo uya kuzaliswa sisigwebo kulowo ungendawo;+Kuya kuma isigwebo nokusesikweni. 18 Kuba lumka umsindo+ ungakulukuhleli ekuqhwabeni izandla ngolunya,Yaye ungavumeli intlawulelo enkulu+ ikulahlekise. 19 Ngaba ukukhalela kwakho uncedo kuya kuba luncedo?+ Hayi, akuyi kuba lulo nasekubandezelekeniKwanayo yonke imigudu yakho yamandla.+ 20 Musa ukubulangazelela ubusuku,Ukuba izizwana zibuye umva endaweni ezikuyo. 21 Zilinde ukuba ungaguqukeli koko kwenzakalisayo,+Kuba unyule oku kunenkxwaleko.+ 22 Khangela! UThixo wenza izenzo eziphakamileyo ngamandla akhe;Ngubani na umyaleli onjengaye? 23 Ngubani omphendulisayo ngendlela yakhe,+Yaye ngubani othe, ‘Wenze intswela-bulungisa’?+ 24 Khumbula ukuba ufanele uwenze mkhulu umsebenzi wakhe+Lowo amadoda aye avuma ngawo.+ 25 Lonke uluntu luwondele;Umntu ofayo uqhubeka ekhangela ekude.+ 26 Yabona! UThixo uphakame ngakumbi kunokuba sinokwazi;+Inani leminyaka yakhe alinakugocagocwa.+ 27 Kuba uwatsala anyuke amathontsi amanzi;+Ahluzeka njengemvula ukwenzela inkungu yakhe, 28 Ukuze amafu athontsize,+Avuzela eluntwini kakhulu. 29 Eneneni, ngubani onokuziqonda iingcamba zamafu,Izithonga eziphuma emnqubeni wakhe?+ 30 Khangela! Ukukhanya kwakhe ukwaneke phezu kwawo,+Neengcambu zolwandle uzigubungele. 31 Kuba ngazo ugweba ityala lezizwana;+Unikela intabalala yokutya.+ 32 Ezandleni zakhe ugubungela umbane,Yaye ubeka umyalelo nxamnye nomhlaseli.+ 33 Ukugquma+ kwakhe kuxela ngaye,Kwanemfuyo ngokuphathelele lowo uzayo.